Next Article Onyeisi Ndị Uwe Ojii Ọhụụ Awụchaala Na Steeti Anambra
Maazị Abang rịọrọ njikọ aka a ụnyaahụ oge ọ gàrà kpọtụrụ ndị nta akụkọ steeti ahụ n'ogige isi ụlọ ọrụ ha bụ' Ezemo International Press Centre' dị n'Awka bụ isi obodo ya bụ steeti. O mere ka a mara mkpebì ya ịbagide n'ibu agha dị egwù megide mpụ, otu nzuzo, arụrụala, ohi na ndị omekóòmè na steeti ahụ, ya na ịchụ ndị na-eme ihe ndị ahụ ọsọ ụkwụ erughị ala na steeti ahụ, wee ruo mgbe ha kwàkọọrọ ngwongwo ha pụchaa na steeti ahụ.
Ihe ndị a niile, dịka o siri kwuo, bụ nke naanị ya na ndị òtù ọrụ ya apụghị imezùpùtanwu ma ọ bụrụ na e nweghị ezi njikọ aka n'etiti ha na ndị otu ọrụ dị iche-iche na steeti ahụ, ọ kachasị ndị ọrụ nta akụkọ, bụzị nke na-akọwa na ha bụ ndị dị oke mkpà n'íme ka ọrụ ya gaa siriri-wèrèrè na steeti Anambra.
N'igosipụta afọ ojuju ya banyere ezi mmekọrịta nke ọ hụtàgòrò n'etiti ndị uwe ojii na ndị nta akụkọ na ya bụ steeti, maazị Abang, bụ onye rụgoro ọrụ n'oge mbụ na steeti ahụ dịka onye uwe ojii jìrì aha ndị uwe ojii steeti Anambra wee nye òtù ndị nta akụkọ ahụ nkwanye ùgwù pụrụ iche, ma rịọkwazie ha ka ha jide ka ha jì.
Na nzaghàchi, onyeisi ndị nta akụkọ na steeti Anambra, bụ maazị Emmanuel Ifesinachi, onye natara ya bụ nkwanye ùgwù n'aha ndị nta akụkọ ahụ kelèrè ya bụ nwa amadi maka ịghọta mkpa ọ dị na òtù abụọ ahụ ga-ejìkọ aka ọnụ n'ọrụ, ya na nkwanye ùgwù ahụ o nyere ha.
O kwèrè nkwà ịga n'ihu ịhụ na ezi mmekọrịta na njikọ aka ahụ dị n'etiti òtù abụọ ahụ ga-adị ọkpụtọrọkpụ, ọbụnadị dịka o siri metụta ikpùghè na ịgba ihe ọjọọ n'anwụ, ime ka ụwa mara nke bụ eziokwu na ịgbasa ozi bànyere ọrụ dị iche-iche ndị uwe ojii ahụ na-arụpụta, tinyere ime ka ndị uwe ojii ahụ na-arụ ọrụ ha otu o sìrì kwesi, bụzị nke ga-enye aka ịchụ mpụ na arụrụala ọsọ na steeti ahụ, ma mekwa ka ọ gaa n'ihu ịbụ steeti kachara nwee udo na ezi ọnọdụ nchekwa n'ala Nigeria.
Ewezùga òtù ndị ọrụ nta akụkọ steeti ahụ bụ ndị lere ya bụ ọbịa, ụfọdụ ndị dị iche-iche selitere isi n'ọrụ uwe ojii na Anambra sònyèrè na ya bụ ọgbakọ, tinyere nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nye aka na-achị ya bụ steeti bụ gọvanọ Willie Obianọ n'ihe gbasaara ụlọ ọrụ 'Anambra Newspapers and Printing Corporation' bụ oriakụ Fanny Ọgụine, na ọtụtụ ndị ọzọ.